Arakaraka ny fitombon’ny olona niteny izany indrindra anefa no toa vao mainka nampitotongana ny faripiainantsika mianankavy. Ilay fahasahiranana aza nivadika fahantrana indray avy eo ary ankehitriny moa lasa fahantrana lalina mihitsy. Tsy halavaina ny resaka satria tsy ilay hoe mila manova toetsaina akory no diso fa ny hetsika tokony hatao hahatongavana amin’izany mihitsy no hita mamparisarisa ny maro tsy mahafoy ny mahazatra azy. Na mpitondra na entina dia voakasik’izany daholo. Matoa ireo firenen-kafa nitovitovy laharana tamintsika fahiny efa tonga amin’ny tena hoe fisandratana marina fa tsy fisandratana nofinofy, araka ilay tsy hitantsika hatramin’izao dia niara-niova toetsaina izy ireo. Nanomboka tany amin’ny vahoaka ka hatrany amin’ny mpitondra. Niray saina tsy hanjifa ny vokatry ny mpanjanatany anglisy ny indianina tamin’ny andron’i Gandhi na dia nampiharana fampijaliana maro loko aza. Nifanaiky hifamela sy hiarina ny Roandey na avy niaina ady an-trano mahatsiravina aza. Isika ity tsy niaina na dia ny ampahazaton’izany tranga izany akory kanefa dia malaina tena hanova toetsaina.